BREAKING NEWS sheikh sharif's father died - SomaliNet Forums
Postby Hiiraan boy » Sat Sep 29, 2007 1:09 pm
War deg deg ah:Shiikh Axmed oo ahaa Aabihii dhalay Shiikh Shariif gudoomiyaha Maxkamadaha islaamka oo Maanta ku geeriyooday gobalka Sh/dhexe. 29 Sep 2007
Posted to the Web 29 Sep 07, 16:57
Allaha u naxariistee waxaa Maanta geeriyooday Shiikh Axmed oo ahaa aabaha gudoomiyaha golaha fulin ta Maxkamadaha islaamka Soomaaliya ahna gudoomiyaha Xizbiga dib U-xuraynta Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed.
Marxuum Shiikd Axmed ayaa Maanta ku geeriyooday tuulada Miirtaqwo oo 20-Km kaga beegan degmada Mahadaay ee gobalka sh/dhexe saacaddu markii ay ku beegnayd 3:00 galabnimo ee Maanta waxaana la sheegay in Shiikh Axmed uu ugeeriyooday Xanuun in muda ah hayay.
Marxuumka geeriyooday ayaa Ifka kaga tegay Carruur uu kamid yahay hugaamiyaha qaaliga ah Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo taageera baaxadleh kuleh gudaha iyo dibada dalka Soomaaliya, Shiikh Shariif ayaa mar gudoomiya ka ahaa Maxkamadihii Islaamka oo mar katalin jiray geyiga Soomaaliya Allaha U-naxariisto Shiikh Axmed mandhinte waa allaa INaa LILAAAH WA INAA ILAYHI RAAJICUUN.
Waasuge Cadaado.com Muqdisho
Joined: Mon Jul 30, 2007 11:34 am
Location: YA MUMS YARD YA UNDERSTAND
Re: BREAKING NEWS sheikh sharif's father died
Postby SLEW_DEM » Sat Sep 29, 2007 1:11 pm
Illahay ha unaxariisto
Postby *Arabman » Sat Sep 29, 2007 8:01 pm
[Illahay ha unaxariisto]
Postby Nabeela » Sat Sep 29, 2007 8:05 pm
Ilahay ha u naxariisto.
Postby Advocatar » Sat Sep 29, 2007 8:06 pm
Joined: Sat Mar 31, 2007 2:31 pm
Postby X-unit » Sat Sep 29, 2007 8:07 pm
May Allah put his soul in Jannah....It is a good month to die..The doors of Jannah are open....and Maybe sheikh Sharif give him the upper hand over the occupying forces
by Abdi_Som » Wed Sep 17, 2008 9:25 pm » in General - General Discussions
by Abdi_Som View the latest post